Tondra-drano any Odisha
Chilka miaraka amin'i Odisha
TOKONY TOKONY TOKONY TORIO NY ORISSA
Programan'ny 04 Nights
[rev_slider alias = "Chilika miaraka amin'ny Golden Triangle Odisha"]
Bhubaneswar Hotel Presidency / similar Hotel Vits / mitovy Hotel The Crown Hotel Mayfair Lagoon
Puri Hotel Naren Palace / similar Hotel Fort Mahodadhi / mitovy Hotel Ananya Resort / Hotel May Waves
Mivory sy miarahaba ny solontenan'ny mpisava lalana Sand Pebbles Tour rehefa tonga eo amin'ny seranam-piaramanidin'ny Bhubaneswar / Railway manaraka miaraka amin'ny famindrana any amin'ny hotely. Taorian'ny vaovao dia mitsidiha ny Khandagiri - Udayagiri Jain sy Nandankanan Zoo (Closed on Monday). Ny hariva - mandalo ny fotoana banga ao Ekamra Haat. Nandritra ny alina tao Bhubaneswar.
Ny maraina - aorian'ny fiara misakafo maraina mankany Puri mitsidika ny Dhauli (Peace Pagoda), Hirapur (Tempoly 64 Yogini), Pipili (Village of Applique Works), Black Pagoda ao Konark (Tempolin'ny Masoandro), Chandrabhaga Beach & Tempolin'i Ramchandi. Feno fankalazana ny Golden Beach sy ny tsenan'i Beach ao Puri. Nandritra ny alina tao Puri.
Hitsidika ny Tempolin'i Lord Jagannath handray anjara amin'ny Live Aarti Darshan, mitsidiha ny Tempolin'i Gundicha sy Temple Temnath.Afrika maraina dia mitsidika ny Lake Chilika ao Satpada mba hijery ny Irrawaddy Dolphins sy ny Ranomasina Mouth. Tsidiho ny Tempolin'i Alarnath any Brahmagiri. Nandritra ny alina tao Puri.
Ny maraina - aorian'ny sakafo maraina dia mandeha mankany Bhubaneswar amin'ny fomba hitsidihana an'i Raghurajpur (Tanànan'ny sary), Sakshigopal (Tempolin'i Radha Krishna), Tempolin'i Lingaraj, Temple Rajarani, Tempolin'i Parsurameswar, Tempolin'i Mukteswar ary Tempolin'i Vault. Nandritra ny alina tao Bhubaneswar.
Taorian 'ny famindrana sakafo maraina ho any amin' ny seranam-piaramanidina / gara mandeha an-dalana.
AC Dzire ho an'ny olona 02, AC Etios ho an'ny olona 04 & AC Innova ho an'ireo olona 06.
Fonenana misy ny sakafo maraina any amin'ny toerana rehetra.
Ny sakafo hariva ihany dia tafiditra ao amin'ny Hotel Mayfair Waves, Puri. (Package Luxury)
01 efitra efitrano ho an'ireo olona 02.
02 efitra efitrano ho an'ny olona 04.
03 efitra efitrano ho an'ny olona 06.
Sarin'ny monument, kamiao fakantsary, fiampangana torolàlana.